Zvikamu muNdiri kubva kuMac
Izvo iwe zvauchazowana mukati mandiri kubva kuMac ndeye yakanaka ruoko ruzivo nezve maMacs, macOS, Apple Watch, AirPods, Apple zvitoro, nhau dzine chekuita nekambani yeCupertino nezvimwe zvakadaro. Zviripachena kuti isu tinoitawo ese marudzi ezvidzidzo, magwara uye emanyorero kune avo vachangosvika muMac zvakasikwa, vatenga Apple Watch kana chero chimwe chigadzirwa cheapuro.
Unogona kuona mashandiro eApple smart wachi kana iwe unogona kuwana ruzivo pane dzese nhau mumasevhisi ekambani yeCupertino. Izvo ndezvekuva neruzivo rwakawanda sezvinobvira nezve Apple uye iyo Ndiri Mac timu inotarisira kukuchengeta iwe uchifambirana nazvo, kuti iwe ugone kuwana zvese zvaunoda munzvimbo imwechete.
OS X Shumba
OS X Shumba yeShumba
Zvimwe Zvirongwa zveMac